Buundada Geel-doox iyo Heshiiska WFP - Cakaara News
Buundada Geel-doox iyo Heshiiska WFP
Jigjiga(CN) Axad, 18ka October 2015, ku simaha maareeyaha ahna maareeye ku xigeenka wakaalada dhismaha jidadka DDSI mudane Maxamed Yuusuf iyo gudi ka socotay hay’yada WFP ayaa heshiis lagu gaadhay meel marinta hirgalinta mashruuca dhismaha buundada geel doox ee gobolka nogob kalasixiixatay.
Mashruucan oo ay wakaaladu hawl-wadeen iyo fulinba kanoqonayso ayaa waxaa kharashka ku baxaya oo gaadhaya 80 milyan oo birr bixinaysa Hay'ada Cuntada Aduunka ee marka afka qalaad lagu soo gaabiyo loo yaqaano WFP.
Kusimaha maareeyaha ayaana sheegay in heshiiska lagu gaadhay in mudo 9bilood ah lagu soo gabagabeeyo dhamaystirka buundadan.
Waxaa intaa dheer, in kusimaha maareeyuhu uu kawarbixiyay ahmiyada ay dhismaha buundadani uleedahay guud ahaan iskuxidhka gobolada deegaanka gaar ahaana inuu door wayn ka qaadan doona isku socodka bulshada degmooyinka gobolka nogob siiba degmooyinka lagahida, salaxaad, dhuxun iyo xamaro. wuxuuna sheegay in ay si wayn uga qayb qaadan doonto kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha DDSI.
Naqshada loo dhisayo buundadana waa kuwa sawirada kucad.